Madaxweynaha Puntland oo isbadal ku sameeyay garsoorka gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo isbadal ku sameeyay garsoorka gobolka Mudug
Madaxweynaha Puntland oo isbadal ku sameeyay garsoorka gobolka Mudug
May 25, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyhaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. [Sawir Hore]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Sciid Cabdullaahi Deni ayaa isbadal ku sameeyay garsoorka gobolka Mudug.
Digreeto ka soo baxday madaxtooyada caawa fiidkii, ayaa xilka looga qaaday garsoorayaasha maxkamadda derejada 1-aad ee gobolka Mudug, tan racfaanka iyo xeer ilaalinta gobolka Mudug.
Maxamed Maxamuud Jamaac oo ahaa garsoore maxkamadda derejada 1-aad ee Xarfo ayaa si kumeel gaar ah loogu bedeley Guddoomiyaha Maxakamadda derejada 1-aad ee Gaalkacyo, digreetada ayaa intaas ku dartay.
Saddex dagaalyahan oo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ka fuliyay Puntland
Madaxweyne Deni oo guddoomiye iyo taliye booliis u magacaabay gobolka Mudug
Puntland Finance Minister presents 2018 budget to parliament
Garowe-(Puntland Mirror) Puntand Finance Minister has presented 2018 budget to parliament on Monday. The 2018 Budget is estimated at $ 92,713, 364, Finance Minister Abdullahi Saeed Arshe said a fund expected from UN agencies was [...]
Meeting between Somali Federal Government and Federal Member States opened in Mogadishu
Mogadishu-(Puntland Mirror) A meeting between Somali Federal Government and Federal Member States opened in Mogadishu on Wednesday, sources said. The leaders of Somali Federal Government and Federal Member States are attending the two-day meeting, and [...]
Al-Shabaab oo gobolka Mudug ku xirtay ku dhawaad 90 oday oo diiday in ay caruurtooda ku wareejiyaan
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ku dhawaad 90 oday ku xirtay gudaha deegaanka War-Shubo oo u dhow degmo xeebeedka Xaro-Dheere ee gobolka Mudug, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Sida ay ilo-wareedku sheegeen, odayaasha ayaa lagu [...]